मोदीमाथि फेरी आइलाग्यो यस्तो तनाव, जनताले बहिस्कार गरेपछि देशभर हंगामा, किन भयो यस्तो ? — Imandarmedia.com
मोदीमाथि फेरी आइलाग्यो यस्तो तनाव, जनताले बहिस्कार गरेपछि देशभर हंगामा, किन भयो यस्तो ?
नयाँदिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘मनकी बात’ नामक कार्यक्रम इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको नकारात्मक प्रतिक्रियाका कारण चर्चामा आएको छ। त्यहाँको सरकारी रेडियो आकाशवाणीबाट आइतबार प्रसारण हुँदै आएको यो कार्यक्रम दुरदर्शनका अलावा कयौं निजी टेलिभिजन च्यानलबाट एकसाथ प्रसारण हुनेगर्छ।
यस्तै पिआईबी भारतीय जनता पार्टी र प्रम मोदीको यूट्यूब च्यानलबाट पनि कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। आइतबार भने यी यूट्यूब च्यानलहरूमा यो कार्यक्रमलाई इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले सकारात्मक भन्दा नकारात्मक प्रतिक्रिया धेरै दिएका छन्।
यी तीनवटै यूट्यूब च्यानलमा लाइक्सको तुलनामा डिसलाइक धेरै आएको छ। यसलाई असामान्य मानिएको छ किनकी यसअघि कार्यक्रमलाई लिएर दर्शकको रवैया यस्तो हुने गरेको थिएन। यसले गर्दा यसपटक किन यस्तो भयो भन्ने चर्चा सुरू भएको छ।
आइतबार कार्यक्रमप्रति इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको प्रतिक्रिया सुरूदेखि नै सुस्त रह्‍यो। कार्यक्रम बिहान प्रसारण भएको थियो तर राति अबेरसम्म पनि स्थितिमा सुधार भएन। यो समाचार तयार पार्दासम्म भारतीय जनता पार्टीको आधिकारिक यूट्यूब च्यानलमा कार्यक्रमले लगभग पाँच लाख भ्यूज पाएको थियो।
यस च्यानलको भिडिओमा १९ हजार मानिसले लाइक गरेका थिए भने डिसलाइक त्यो भन्दा कयौं बढी छ। डिसलाइकको संख्या १ लाख ८१ हजार छ। यसैगरी मोदीको आफ्नो यूट्यूब च्यानलमा ४ लाख ९० हजार भ्यूज पुग्दा १९ हजार लाइक र ३५ हजार डिसलाइक आएको छ। यसैगरी पिआईबीको च्यानलमा ९१ हजारमात्र भ्यूज थियो भने लाइक र डिसलाइकको संख्या क्रमशः ३ हजार २ सय र १० हजार आएको छ।
सम्बोधनमा के भनेका थिए प्रम मोदीले?
हरेक कार्यक्रममा फरक विषयमा कुरा गर्ने मोदीले यसपटक ओणम पर्वको बारेमा कुरा गर्नुका साथै भारतीय उद्धमीलाई खेलौना कारोवारका सम्भावनाका बारेमा खोजी गर्ने सुझाव दिए। उनले स्वदेशी खेलौना बनाउनुपर्नेमा जोड दिदैं भने, ‘विश्वमा खेलौना उद्योगको व्यापार ७ लाख करोड भारतीय रूपैयाँ भन्दा धेरै छ तर यति ठूलो कारोबारमा भारतको हिस्सा एकदमै कम छ।’
यसका अलावा मोदीले भारतले कम्प्यूटर खेलहरू पनि बनाउनुपर्ने बताए। ‘हाम्रो देशमा सोच छ। भर्चुअल गेम्स र खेलौनाको क्षेत्रमा धेरै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुछ र सबैले खेलौनाका लागि केही गर्नुपर्ने बेला आएको छ’, उनले भने। (बिबिसी हिन्दीबाट)
यसैबीच भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा फेरि नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा एकैदिन अहिलेसम्मकै धेरै ७९ हजार ४५७ जना संक्रमित छन् । योसँगै सोमबार यो समाचार तयार पार्दासम्म भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या ३६ लाख १९ हजार १६९ पुगेको छ ।
संक्रमितको यो संख्या एसियाली देशमा सबैभन्दा धेरै हो भने विश्वमा सबैभन्दा बढी संक्रमित हुने देशहरूको सूचिमा तेस्रो हो । संक्रमितमध्ये अहिलेसम्म २७ लाख ७२ हजार ९२८ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने ७ लाख ८१ हजार ६२४ जनाको उपचार भइरहेको छ ।
यस्तै भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणले ६४ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ९६० जनाको मृत्यु भएपछि भारतमा यो समाचार तयार पार्दासम्म मृत्यु हुनेको संख्या ६४ हजार ६१७ पुगेको वर्ल्डोमिटर्सले जनाएको छ ।
यस्तै भारतको ओडिशामा भारी वर्षापछिको बाढीले कम्तिमा १७ जनाको मृत्यु भएको छ । छत्तीसगढ, झारखण्ड र ओडिशामा भएको भारी वर्षापछिको बाढीले १७ जनाको मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
महानदीसहितका अरु नदीमा आएको बाढीले राज्यका २० जिल्लाका हजारौँ मानिस प्रभावित भएका छन् । बाढी र डुबानले कयौँका घरमा खाद्यान्न र सफा पानीको समेत अभाव भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।
कटक, जाजपुर, केन्द्रपडा, खोर्धा, पुरी र भद्रक जिल्लामा जनजीवन प्रभावित भएको छ । बाढीपछि ३ हजार २५६ गाउँ प्रभावित भएका छन् भने ३४० वटा बस्तीमा यातायात टुटेको छ । ती क्षेत्रमा २ लाख ५० हजारभन्दा बढी विस्थापित भएको बताइएको छ ।